Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan Kenya | Burconews
Burconews.net:-Tan iyo markii uu billowday khilaafka xiriirka la leh muranka xuduudda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa aad uga gaabsaneysay in ay ka jawaabto tallaabooyiinka loo arko in ay cadaadis yihiin ee ay qaaday Kenya.
Balse dadka ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa aaminsan in Kenya ay ku “fududaatay” go’aanka ay qaadatay marka la eego xiriirkan taariikhiga ee ka dhaxeeya labada dal.
Markii khilaafka uu sii xoogeystay, Kenya waxaa lagu eedeeyay in ay Maamul Goboleedyada dhankooda u weecatay, “ayna khilaaf ka dhex abuureyso dowladda iyo maamullada”.
Balse, Wasiirka waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay magaalada Baardheere ayaa sheegay in Soomaaliya ay “leeyihiin Soomaali; ayna ka shaqeynayaan Soomaali” una fikirayaan dad Soomaali ah.
“Wixii intaa ka baxsan, waa inaan cagaheena ku doonanaa dhibaato. Waad la socotaan siyaasaddu marba meel bay aadeysaa”, ayuu yiri.
Wasiir Goodax ayaa intaa ku daray: “Hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhuunduleesho. Walaaleheen xagey garruun ku dhuftaan; xagey bud ku dhuftaan; xagey dhagax ka tuuraan. Anaga aamusnaantaas ayaan doorbidnay, taas ayaana wadeynaa”.
“Wixii ka xanaajiyayba, haddii ay xanaaqsan yihiin, illaa ay degaan waan sugeynaa. Waa inaad walaalkaa u sugtaa intuu ka soo miyirsanayo. Anaga siyaasad noocaas ah ayaan ku dhaqmeynaa”, ayuu hadalka ku daray, wasiir goodax Barre oo ka hadlay magaalada Baardheere.
Kenya ayaa joojisay duullimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, waxay sidoo kale amartay in saraakiisha dowladda ay fiisaha ka soo qaataan safaaraddooda Muqdisho. “Tallaabooyiinkaas waxaa loo arkay cadaadis la saarayo Soomaaliya”.
Goodax Barre oo soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada oo tagaya Nairobi, shirarna ku yeelanaya wuxuu tilmaamay in “dowlad ahaan ay dhibeyso”.
“Markaan aragno maamul goboleedyadii oo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shirayo, meel ay ku kulmaanna aanan waayin, wey na dhibeysaa”, ayuu yiri wasiirka.
“Waxaan kor u qaadqaadeyno ma ahan, iyagaas marbuu caqliga u soo noqon doonaa oo gurigooda ay howshooda ku qabsan doonaan”.